देशभरका ह्याचरी उद्योग आजदेखि १० दिन बन्द – News Portal of Global Nepali
चितवन । लागतअनुसार मूल्य नपाएको भन्दै नेपाल ह्याचरी उद्योग संघले आइतबारबाट ब्रोइलर कुखुराका चल्ला उत्पादन बन्द गरेको छ । आइतबारबाट १० दिनसम्म चल्ला उत्पादन बन्द गरिने नेपाल ह्याचरी उद्योग संघका अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।
पञ्चरत्न फिड्का प्रमुख एवम् पोल्ट्री विज्ञ डा. तिलचन्द्र भट्टराईले चल्ला उत्पादन गरेर निरन्तर घाटा भोग्नुपरेकाले १० दिन बन्द गर्न लागिएको बताए । ‘आफूहरुको लागत ५५ भन्दा माथि हुन्छ १५/२० रुपैयाँ गोटा चल्ला बेच्दा भएको घाटा कसरी कहिलेसम्म सहने ?’ डा. भट्टराईले भने, ‘मैले त २० मा बेच्नुभन्दा खाल्डामा पुरिदिन भनेको छु ।’
बजार किन यस्तो अनियन्त्रित भयो भन्नेबारेमा खोजी भैरहेको डा. भट्टराईले बताए । ‘मासुको उपभोग घटेको छैन, अण्डाको उपभोग घटेको छैन, तर निरन्तर मासु अण्डा र चल्लाको भाउ खटिरहेको छ,’ डा. भट्टराईले भने ‘आत्मनिर्भर उन्मुख पोल्ट्री क्षेत्रलाई नै असर गर्ने खेल भैरहेका छन्, यसमा हुने विदेशी लगानीले पनि थोर बहुत काम गरेको छ ।’
नेपालमा कुखुरापालन क्षेत्रमा एक खर्ब २० अर्ब लगानी छ । ब्यवसायीहरु बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको पोल्ट्री विज्ञ डा. भट्टराइले बताए । नेपालमा कुखुराजन्य क्षेत्रमा भएको लगानीमध्ये आधा हिस्सा चितवनमा छ ।